ရထားထဲမှာအားဖြင့်ဥရောပခရီးသွားဖို့အတွက်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ 2020 | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားထဲမှာအားဖြင့်ဥရောပခရီးသွားဖို့အတွက်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ 2020
ရထားလမ်းအားဖြင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာအလျင်သွားမပေးကြောင်းတစ်ကာလကြာရှည်အစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ် – ရထားအမြန်ဆုံးများမှာ, အများဆုံး Eco- ဖော်ရွေ, တစ်နေရာမှတစ်နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း. ကျွန်ုပ်တို့၏မီးရထားလက်မှတ် system ကိုရထားခရီးစည်းရုံးရေးထဲကနာကျင်မှုကြာပေမယ့်လည်း, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှုအများကြီး အကြွင်း. သငျသညျဥရောပတစ်ဝှမ်းစုံလင်ခရီးစဉ်စီစဉ်ကူညီရန်, ဤနေရာတွင်ရထားဥရောပခရီးကြှနျတျောတို့၏ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များများမှာ.
ရထားဖြင့်ဥရောပသို့သွားရန် 2020 သင်၏လမ်းကြောင်းကိုစီစဉ်ရန်နှင့် ဦး တည်ရာတစ်ခုစီတွင်သင်မည်မျှအချိန်ဖြုန်းရမည်ကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်. အကယ်. အမ်စတာဒမ်, ဘာလင်, လန်ဒန်, မီလန်, ပဲရစ်, နှင့် ဗင်းနစ် သင့်ရဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေ-မြင်စာရင်းတွင်များမှာ, ဒီဖြစ်ပျက်စေရန်အရှိဆုံးပညာရှိလမ်းကြောင်းမှထွက်တွက်ဆ. သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ချင်သောနေရာများများစာရင်းကိုနှင့်သင်အကြမ်းဖျင်းသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ထွက် map နိုငျသောနညျးလမျး Make. သင့်ရဲ့ရက်စွဲများအပေါ်ဆုံးဖြတ်နှင့်မည်မျှရက်ပေါင်းသင်သည်သင်၏ဖြည့်စွက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီအရပျ၌ဖြုန်းပါလိမ့်မယ် လမ်းကြောင်းခရီးစဉ်.
သငျသညျရထားအားဖြင့်အခါသင်ခရီးသွားဥရောပလုပျနိုငျအဆိုးဆုံးအရာတစျခုမှာအလွန်အကျွံအတွက်ကြိုးစား fit ရန်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်သို့တတ်နိုင်သမျှအများအပြားမြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများသည်ကြိုးစားယိုမှသဘာဝစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်, သို့သော်, သငျသညျစနစ်တကျတစ်ခုချင်းစီကိုဦးတည်ရာကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့မသွားလျှင်ခရီးတာမမှတ်လည်းမရှိ! သိပ်ထုပ်ပိုး များစွာသောနေရာများ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်သို့အကုန်အကျနိုင်ပါတယ်နှင့်ဟိုတယ် Check-ins နှင့် Check-တနေရာတစ်မှုန်ဝါးသို့သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်.
အလွန်အကျွံအတွက်ကြိုးစား fit မှထက်ဒါဟာလေးရယ်မှတစ်ခုချင်းစီကိုရပ်တန့်ပျော်မွေ့ဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်. သင်တို့အပေါ်မှာကယ်တင်မည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့်သင့်နေရာများလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပိုအချိန်ရရှိ.
ရထားသဖြင့်ခရီးသွားဥရောပရန်သင့်လမ်းကြောင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, နိုင်ငံ၏ငွေကြေးစစ်ဆေးသေချာအောင်. မတိုင်းတိုင်းပြည် ဥရောပ ယူရိုငွေကြေးအသုံးပြုသည်. တောင်မှတချို့အီးယူအဖွဲ့ဝင်, ထိုကဲ့သို့သောဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ခရိုအေးရှားအဖြစ်, နေဆဲသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးအသုံးပြုနိုင်သည်. ယူရိုနှင့် Non-ယူရိုနိုင်ငံတွေ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး.
Fast Currency Converter App မှမျှဝေထားသောပို့စ်တစ်ခု (@currencyconverterapp)
သငျသညျအရပျသို့အရပျမှရွှေ့ကြောင့်ဟိုတယ်နှင့်နေထိုင်ရန်အဆောင်များစာအုပ်ဆိုင်မှဖြစ်နိုင်သော်လည်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘယ်သူမျှမနေရာထိုင်ခင်းလုံခြုံနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုရောက်လာမသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးအကြံပြု. သင့်ရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ နေထိုင်ရန်အဆောင်များ/မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင်ပထမဦးဆုံးတစျခုအတှကျကြိုတင်မဲအတွက်ဟိုတယ်များ, အထူးသဖြင့်ဘာလင်ကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့ရာသီအတွင်းလူကြိုက်များမြို့ရွာတို့အဘို့နှင့် ပရာ့ဂ်. ဖြစ်ရပ်များ, ကဲ့သို့ ပွဲတော်များ မြို့ကြီးများအတွက်, ရရှိနိုင်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိ. သင်ပိုမိုသောအရာတို့ကိုလုပ်နေသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းနည်းလမ်းစိုးရိမ်မဟုတ်, သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန် sightseeing နှင့်ခံစားတူသော!
တတ်နိုင်သမျှနေ့ချင်းညချင်းအဖြစ်တာ – ရထားများကဥရောပခရီးသွား
သင်သာတစ်မြို့အတွက်ပဲတနေ့ဖြုန်းအပေါ်အစီအစဉ်ရှိပါက, တို့ကအဲဒီမှာရရန်ကြိုးစား ညဥ့်ရထား. သငျသညျတညဉ့်မီးရထားယူပြီးအားဖြင့်နေ့ကိုနယ်လှည့်နေစဉ်အတွင်းသင်၏အချိန်ဖြုန်းခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး, သင်လုပ်နိုင်သည် ပိုက်ဆံကယ်တင် နေရာထိုင်ခင်းပေါ်နှင့်သင့်လိုရာခရီးကိုစူးစမ်းဖို့ပိုအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့နေ့ချင်းညချင်း booking လိုက်တဲ့အခါ ရထားလက်မှတ် ဒါကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်အရပျမှရရန်ကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးစစ်ဆေးသေချာအောင်.
အဆိုပါစကားပြောရန်သေချာစေပါ ဒေသခံတွေ သင့်ရဲ့အပေါ်သို့မဟုတ်အခြားခရီးသည် ရထားခရီး. သူတို့သင်တဲ့ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာမှမထက်ပိုပြီးအဖိုးတန်နိုင်ပါတယ်ငါပေးမည်သောသတငျးအခကျြ. အခြားသူများပြောနေတာ by, သင်အပေါ်အကြံပြုစေခြင်းငှါ စားရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာများ, ကခုန်သွားကြဖို့, ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်, ကြီးမားသော အပန်းဖြေသောနေရာများ, လှည့်ပတ်ရရန်နှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း.
သင်၌ရထားများကဥရောပခရီးသွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ် 2020? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အကောင်းဆုံးရထားလက်မှတ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူနေ့စွဲအထိစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ရန် Facebook က နှင့် တွစ်တာ စာမကျြနှာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု အွန်လိုင်းတစ်ဦးကရထား Save ဥရောပတစ်လွှားဖြစ်သွားတာသတိထားရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအဘို့
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-tips-travel-europe-train-2018%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင် / pl မှ / က de သို့မဟုတ် / ru ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.